U-Matthew unokuphawula okungu-381 kwezinye izindawo.
Lesi sakhiwo esisha esimangalisayo esinezitezi ezimbili sinemibhede eyi-12 (amagumbi okulala ayi-3!), Ikhishi eligcwele ngokugcwele, amathani okupaka okwengeziwe kwezikebhe / amathoyizi akho, futhi iza nokufinyelela echibini lomphakathi, ubhavu oshisayo, i-clubhouse ngaphakathi kwebanga lokuhamba!
Leli khaya elihle lilungele ukuthi uze ulijabulele! Isiphambano esikhangayo phakathi kwemigqa ecwebezelayo, yesimanje yokwakhiwa okusha, kanye nomuzwa omncane wemihlobiso yekhabethe kusebenza ndawonye ukwakha ikhaya ongathanda ukuhlala kulo! Isabalele phezu kwezindaba ezimbili futhi inamakamelo okulala ayi-3 ahlukene, ngalinye linegumbi lokugezela le-en suite kanye nekhabethe elikhulu, leli khaya lizohlinzeka ngendawo eningi yakho neqembu lakho. Itholakala phakathi nebanga lokuhamba ngezinyawo ukusuka esitolo esisha segrosa, uzokwazi ukufinyelela kalula kunoma yini oyoyidinga. Awukwazi ukunqoba indawo, njengoba iphakathi nendawo ye-Utah Marina kanye nazo zonke izitolo zakho eziyintandokazi zama-shake nezindawo zokudlela e-Garden City. (Uhambo lwemayela elingu-1/4 kuphela ukuya endaweni yase-marina noma yedolobha lase-Garden City). Ngokupaka izimoto ezifika kwezingu-9, i-Bearadise Lakehouse iyona enesethingi ephelele yokuletha zonke izimoto zakho, ama-trailer namathoyizi ukuze udlale ngokuzikhandla phakathi nosuku, futhi ube nendawo enhle ongayibiza ngesizinda sasekhaya kusihlwa.
I-Bearadise Lakehouse iza nokufinyelela echibini lomphakathi, ubhavu oshisayo kanye ne-clubhouse! Zifudumeze ngokucwilisa ngokushesha kubhavu oshisayo ngemva kosuku olude echibini, noma ujabulele usuku oluthe xaxa lokuphumula echibini, kokubili okungaphansi komgwaqo ukusuka endleleni yokungena.
Ikhishi ligcwele yonke into oyoyidinga ukuze wenze ukudla kwakho okuthandayo. Amatafula okudlela amabili anikeza isikhala esiningi sokuba iqembu lakho lonke lihlangane ndawonye ngezikhathi zokudla, futhi usofa omkhulu uhlinzeka ngendawo enhle yokuhlala ngokunethezeka phambi kwe-TV enkulu. Kukhona i-patio enkulu, indawo yokushisa ye-BBQ kanye negceke elinotshani eliningi elilungele ukudlala imidlalo yasegcekeni noma ukuhlangana ukuze udle ngaphandle.
Ukuze kube lula kuwe ukuhlela, nali ilungiselelo eliqondile lekamelo ngalinye lokulala:
Igumbi Lokulala Eliphansi Elikhulu: Umbhede Ogcwele Ogcwele Ogcwele
Inkosi Ephezulu #1: Inkosi
Inkosi Ephezulu #2: Inkosi
Inkosi Ephezulu #3: Inkosi
Igumbi Lezingane Eliphezulu: Amasethi Amabili Amabhantshi Amabili Kathathu kanye Newele Elilodwa Elingeziwe
**Uma uneqembu elikhulu, noma ufuna nje indawo eyengeziwe, sicela usithinte! Siphatha amanye amakhaya amaningi kulo mphakathi ofanayo, futhi singajabula ukuzama ukukusiza uthole elinye ikhaya ongaliqasha!**
Imibhede elala umuntu oyedwa engu-7